सगरमाथाको उचाई नाप्न नेपाली प्राविधिक टोली आधार शिविर पुग्यो | Seto Khabar
सगरमाथाको उचाई नाप्न नेपाली प्राविधिक टोली आधार शिविर पुग्यो
२०७६ बैशाख २५, बुधबार (१ साल अघि)
काठमाडौँ, बैशाख २५ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ नाप्नका लागि नेपालको सरकारी टोली आधार शिविर पुगेर आरोहणको तयारी गरिहेको छ। उच्च हिमाली वातावरणसँग अनुकूल हुन त्यो टोलीका सदस्यले एक चरण सात हजार मिटरसम्मको उचाइ छोइसकेका छन्। अब उनीहरू आरोहणका लागि उपयुक्त मौसमको प्रतीक्षामा छन्।
नेपालको इतिहासमा सगरमाथाको उचाइ नाप्न लागिएको यो पहिलो पटक हो। यसपटक नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछ। त्यसका लागि प्राविधिक टोलीले चुचुरोसम्मै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ। उक्त सरकारी टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम, नापी अधिकृत रविन कार्की, सर्वेक्षक सुरजसिंह भण्डारी र अमिन युवराज धिताल रहेका छन्। केही आरोहण सहयोगी पनि टोलीमा सहभागी छन्।
को को जाँदैछन् चुचुरोमा ?
चार सरकारी कर्मचारीमध्ये गौतम र कार्की सगरमाथाको चुचुरोमै पुग्ने योजनामा छन्। चुचुरोमा जाने टोलीका सदस्यले ग्लोबल न्याभिगेशन स्याटलाइट सिस्टम ९जीएनएसएस० नाम उपकरण लानेछन्। उक्त उपकरणले सगरमाथाको चुचुरोमा भू उपग्रहबाट पठाएका डेटा, तापक्रम, गुरुत्वाकर्षण, मौसमी तथ्याङ्क र आद्रतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङकलन गर्नेछ।
सन् २०११ मा निजामती कर्मचारी आरोहण दलको सदस्यका रूमा गौतमले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धितालले भने आधार शिविरमा बसेर उनीहरुलाई सहयोग गर्नेछन्। तयारीका क्रममा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत गौतम संयोजकत्वको चारसदस्यीय उचाइ मापन टोलीले ६,१८९ मिटर उचाइ अग्लो आइलन्ड पीक आरोहण गरिसकेको छ।
काम कति सकियो ?
नापी विभागले भारतको बङ्गाल हुदै नेपाली भूभाग सिराह जिल्लाको माडारलाई केन्द्रविन्दु मानेर सम्पर्क स्थापित गरेको छ। जीएनएसएस उपकरणको सहयोगमा सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुरलगायतका स्थानहरूमा विन्दुहरू कायम गरिएका छन्।
एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ती विन्दु कायम गरिएको विभागले जनाएको छ। भूबनोट, सतह मापन, उचाइ मापन, आधार विन्दु कायम गर्ने, स्थलतगत अवलोकन गरी हालसम्म झन्डै तीन सयवटा विन्दु कायम गरिएको नापी विभागका प्रमुख सुशील डङ्गोलले बताए।
लेभल मशिन, जीएनएसएस मशिन, ग्र्याभिमिटर आदि उपकरणको प्रयोग गरेर तल्लो क्षेत्रको उचाइ मापन गरिएको विभागले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको र झन्डै डेढ महिनाभित्र सबै विवरण सङ्कलन हुने डङ्गोलले बताए ।
यसअघि सन् १९५४ मा भारतको नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो। उसले सगरमाथाको उचाइ समुद्र सतहदेखि ८,८४८ मिटर भएको बताएको थियो। अहिलेसम्म विश्वभरि त्यो उचाइ नै मान्य हुँदै आएको छ।
त्यसपश्चात् पनि विभिन्न समयमा विभिन्न निकायले उचाइ मापन गरी फरकफरक उचाइ निकालेका छन्। तर तिनले आधिकारिक मान्यता पाएका छैनन्।
सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभागले काम अघि बढाएको थियो। सतही मापनको ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको डङ्गोलले बताए। उनले भने, सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर जीएनएसएस डाटा सङ्कलन र खुम्बु क्षेत्रका आठवटा स्थानको तथ्याङ्क लिने कार्य भइरहेको छ। यी कार्य पूरा भएपछि तथ्याङ्क एकीकृत गरेर रुजु गर्छौँ।
उनका अनुसार सगरमाथाको चुचुरोबाट जीएनएसएस उपकरखओ डेटा आएमा आगामी पुस मसान्तभित्र परिणाम सार्वजानिक हुनेछ। विसं २०७२ सालको ठूलो भूकम्पपश्चात् सगरमाथाको उचाइ के भयो होला भन्ने चासो धेरैमा देखिएको छ। बीबीसी